एक रातको लागि मात्रै, स्पेनलाई ढाल्न पुरानो बनिदिएको इटाली – Talking Sports
जर्जिन्होको पेनाल्टी निर्दयी थियो । चतुर्याइपूर्ण पनि । अपेक्षा गरिए भन्दा बिल्कुल बिपरित । फुटबल कला जस्तै ।
वेम्ब्ली स्टेडियममा स्पेनलाई गिज्याउदै युरो कपको फाइनल पुगेको इटाली पहिले जस्तै सबैथोक थियो । आक्रमणको बाढीलाई निरन्तर रोक्ने, पेनाल्टी सुटआउट नहुञ्चेल आफ्नो खुट्टा अडिग बनाएर राख्ने पुरानो इटाली ।
निरन्तर बनाएको आक्रमण र तुलनात्मक रुपमा मौका सृजना गरेको कारण तपाईलाई स्पेन फाइनलको हकदार थियो लागेको होला होइन ? तर यो हकदार को हो भन्ने कुरासंग सम्बन्ध नै राख्दैन ।
२०१८ को बिश्वकपमा छनौट हुन असफल भएपछि सिरी आ बाट युवा बिकास फ्याक्टरीको उत्खननसंगै बनेको टोली पोस्टमा बिपक्षीको अनुहार अगाडीबाटै उत्सुकताका साथ आक्रमण बुन्ने र रक्षापंक्तिमा उत्तिकै मजबुत रहने यो नयां इटाली थिएन ।
यो त्यो पुराना इटाली थियो जसले बिपक्षीको आक्रमण निल्दै ‘डोर बोल्ट डिफेन्स’ मा एक शतक नै बितायो । त्यही सिस्टमको वरिपरि रहेरै चार पटक बिश्वकप उपाधि उचाल्यो ।
यो यस्तो जिद्दी इटाली थियो जो बन्न सक्ने मौकामा रुची राखिरहेको थिएन र स्कोरबोर्डमा गोल र तथ्यांकको उसलाई कुनै मतलब पनि थिएन । र यो सम्भवत हुने नै थियो ।
साना तिना कृया र प्रतिकृया रहने गरेको सबै खेल आफू भित्रै सिमित रहेको हुन्छ । फुटबलको सबैभन्दा उच्च र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा परिणाम आइसके पछिको खेल त्यही मर्छ ।
अर्को खेलबाट फेरि नयां शुरुवात गर्नै पर्छ ।
जर्जिन्होले यति सुस्त र आरामले पेनाल्टी प्रहार गरेकी स्पेन गोलपिकर उनाई सिमोनले अर्को साइडमा डाइभ हानेर उठ्दा बलले पोस्टो अन्तिम भाग चुमिरहेको थियो ।
तर समुह चरणको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्पेनले आफ्नो उच्च लय पाउन थालिसकेको थियो ।
स्पेन बल चाहन्थ्यो । पोजेसन राख्न नै उ खेलमा आएको थियो । इटालीलाई दवाबमा राख्दै पोस्टमा आक्रमण बुन्ने थियो । त्यो संग कुनै हालमा सम्झौता गर्न आवश्यक थियो ।
इटालीले गर्यो ।
क्वार्टर फाइनलसम्म देखाएको अलग प्रदर्शनले इटालीले अझै पनि त्यो पुरानो शैलीलाई कायमै राख्न सक्नु निकै आकर्षक कुरा हो । चाहे जति नै असहज किन नदेखियोस ।
डिफेन्सको खम्बा रहेका सेन्टर ब्याक लियोनार्डो बोनुच्ची र कप्तान जर्जियो किलिनीलाई यसको श्रेय दिदा हुन्छ । तर उनीहरु दुई मै यसलाई सिमित नराख्दा राम्रो हो ।
हाल आफ्नो पोजिसनमा बिश्वकै उत्कृष्ट रहेका र पेरिस सेन्ट जर्माइनको रक्षात्मक सुधारको केन्द्रमा रहेका गोलकिपर जियानलुईजी डोनारुमा अल्भारो मोराटाको बिश्वस्तरीय गोलले बिट मात्र भएका हुन् । नत्र उनले खेल अवधिभर अनगिन्ती बचाउ गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा आफूलाई बिश्वस्तरको खेलाडी साबित गरेका लियानार्डो स्पिनाज्जोलाको स्थान लिएका लेफ्ट ब्याक एमर्सन पाल्मेरीले उनको कमीको महसुस हुन दिएनन् । यसको कारण अन्तिम समुह चरण खेलमा शुरुवाती ११ मा खेलाउदै उनलाई यस्तो परिस्थितिका लागि तैयार बनाउनु हो ।
प्रशिक्षक रोबर्टो मान्चिनीले आफ्नो टिम नक आउटका लागि छनौट भइसकेपछि वेल्सबिरुद्धको खेलका लागि अधिकांश शुरुवाती ११ का खेलाडीहरुलाई बिश्राम दिएका थिए । उनले सबै कुरा सही गर्दै आएका छन्, युरो देखि मात्र नभएर तीन बर्ष अगाडी इटालीको बागडोर सम्हाले देखि नै ।
पेनाल्टीमा मोराटाको प्रहार रोक्नु बाहेक डोनारुमालेधेरै महत्वपूर्ण प्रयासहरुलाई बिफल पारेका थिए ।
आफ्नो शुरुवाती प्रशिक्षण करिअरमा मान्चिनी व्यवसायिक रणनीतिकारको रुपमा स्थापित भए । तर इटालीको हकमा उनले यस किसिमको संगठनलाई मैदान भित्र मात्रै सिमिति राखेका छैनन् । अव्यवहारिक नै देखिएपनि उनले झण्डै १ सय जनालाई डेब्यु गराएका छन् ।
फाइनल पुग्नका लागि स्पेनबिरुद्ध रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेका मान्चिनीको नयां स्वरुप पाएको टोलीले उनलाई नसुन्ला त ?
गल्ति नगर्दा पनि हुन्छ । मान्चिनीको योजनालाई इटालीका खेलाडीहरुले आफू संघर्ष गरेरै भएपनि साथ दिएका छन् । मंगलवार खेलमा ७० प्रतिशत पोजेसन स्पेनकै थियो । इटालीको ‘बल पासिंग’ एक तिहाई पनि थिएन । इटालीले आफैलाई सिमित गराएर राखेको स्पष्ट थियो ।
जब अवसर आयो इटाली हावाको बेग जसरी कुद्यो । डोनारुमाले हातबाट दिएको पास फेडेरिको चिएसासम्म पुगेर गोल हुंदा जम्मा १३ सेकेण्ड लागेको थियो । एक्कासी खेलमा इटालीको अग्रता भयो । एक्कासी स्पेनको लागि गल्ति गर्ने मौका झनै सांघुरिए ।
न मोराटाको उत्कृष्ट गोलको महत्व ठूलो भयो न दुवै टोलीको तागत चुस्ने ३० मिनेटको अतिरिक्त समय उपयोगी ।
गणना अन्धाधुन्ध रहेको टाई ब्रेकरले त्यही टिमलाई साथ दिन्छ जसलाई धेरै डर हुदैन ।
इटाली कप्तान किलिनी टाई ब्रेकरमा खेल पुग्दा जति उत्साहप्रद देखिन्थे उनका स्पेनिस समकक्षी जोर्डी आलबाको ‘बडी ल्यांगवेज’ त्यो किसिमको थिएन ।
ड्यानी ओल्मोको शुरुवाती प्रहार आकाशिनुका साथै मोराटाको चौथो प्रहारलाई डोनारुमाले रोकेपछि स्पेनले दुई वटा प्रहार खेर फाल्यो । जर्जिन्हो निर्णयक पेनाल्टीमा शान्त देखिए, र निर्दयी पनि । त्यति सहज पेनाल्टी यसअघि भएका दुई वटा टाई ब्रेकरमा कसैले प्रहार नै गरेका थिएनन् ।
जर्जिन्होलाई आफू पेनाल्टीमा आरामले गोल गर्ने आभाष थियो । उनले भविष्य पहिले नै देखे जस्तै । ‘मैले नै निर्णायक पेनाल्टीमा गोल गरेर टिमलाई जिताउने छु’ जस्तो ।
खेलको अधिकांश समय यसअघि नै आफुले यो खेल खेलिसकेको जसरी डिफेन्ड गर्दै आफ्नै हाफमा क्याम्प बनाईरहेको इटाली देखियो । बिगतको इटाली र उ संलग्न खेल यस्तै हो ।
अचम्म के हो भने इटालीले जम्मा एक पटक युरो कप जितेको छ । त्यो टेलिभिजनको जमाना थियो। बिश्व फुटबलमा इटालीले जति नै उपलब्धि हात पारेपनि युरो कप उनीहरुको प्रतियोगिता होइन जस्तो भान हुन्छ ।
आइतबारको फाइनलमा इटालीलाई फेरि नयां इटालीको स्वरुपमा फर्कने मौका छ ।
एक रातको लागि मात्रै हो नयां इटालीको अनुभव नभएको । अझै भनौ उसले आफै पुरानो रुप धारण गरेको । रमाइलो अझै बाकी नै छ ।
मेस्सी बार्सिलोनामै बस्न आफ्नै तलब तगारो
मार्टिनेजले तीन पेनाल्टी बचाएपछि अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा
९० औं मिनेटको गोलले बार्सिलोना जोगियो
नेपाली फुटबल टोलीले बलियो ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल्ने !
अन्तिम ४ मिनेटमा दुई गोल गर्दै रियलको सनसनीपूर्ण जित
नेपालले ८ बर्षमा पहिलो पटक ओमानलाई हरायो
नेपालको उत्कृष्ट बलिङ्ग, ओमान १ सय २१ रनमै समेटियो
ओमान विरुद्ध बलिङ गर्दै नेपाल, आज दुई परिवर्तन
युभेन्टस छोड्ने मुडमा छैनन सुपरस्टार रोनाल्डो
युरो कपमा पांच गोलसहित सर्वाधिक गोकर्ताको गोल्डेन बुट जितेका पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिष्चियानो रोनाल्डोले इटालियन सिरी आ टोली युभेन्टस नछोड्ने संकेत गरेका छन् ।
क्लबका निर्देशक तथा पुर्व चेक रिपब्लिक लेजेण्ड पाभेल नेदभेदले रोनाल्डोले क्लबमै रहने अथवा छोड्ने बिषयमा कुनै जानकारी नगराएको र यसै महिनाको अन्तिम साता टुरिनमा प्रशिक्षणमा सहभागी हुने जानकारी दिएका हुन् ।
“क्रिष्चियानो अहिले छुट्टी मनाइरहेका छन् । उनी छोड्ने बिषयमा उनको टोलीले केही भनेको छैन र पुर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै उनी अब जुलाई २५ मा प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्,” युभेन्टसको २०२१-२२ सिजनको क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेदभेदले भने ।
३६ बर्षको उमेरमा पनि युरो कपमा स्थापित युवा अनुहारहरुलाई पछि पार्दै गोल्डेन बुट जितेका रोनाल्डोको युभेन्टससंगको सम्झौतमा अझै एक बर्ष बाकी रहेको छ ।
सिरी उपाधिमा ९ बर्षपछि पहिलो पटक आफ्नो नियन्त्रण गुमाउनुका साथै गत बर्षको च्याम्पियन्स लिगमा अन्तिम १६ बाट बाहिरिएको युभेन्टस यो सिजनको युरोपियन प्रतियोगिताका लागि पनि मुस्किलले स्थान बनाएपछि रोनाल्डोभविष्य अनिश्चित रहन पुगेको थियो ।
प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्रिको पुनरागमनमा युभेन्सटले सिजनको आफ्नो पहिलो खेल युडिनेजी बिरुद्ध खेल्नेछ ।
“एलेग्रिलाई लिएर हाम्रो पांच बर्षको निश्चित कार्य तालिका थियो । त्यसपछि उनी दुई बर्ष छुट्टीमा गएका थिए । अब नयां उर्जा सहित उनी टोलीमा फर्कदैछन्,” नेदभेदले भने ।
युरो कप फाइनलका पोर्चुगिज हिरो कसरी बने बेरोजगार ?
२०१६ को गर्मिमा एडर पोर्चुगलका राष्ट्रिय हिरो थिए । सब्स्टिच्युटको रुपमा बेञ्चबाट आउदै उनले अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई युरो कपको उपाधि जिताएका थिए ।
स्टाड डि फ्रान्समा घरेलु टोलीबिरुद्ध भएको फाइनलमा हाल ३३ बर्षपुगिसकेका एडर रेनातो सान्चेजको स्थानमा ९० औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए ।
सुपरस्टार क्रिष्चियानो रोनाल्डो चोटका कारण मैदानबाट खेलको शुरुवातमै बाहिरिएको स्थितिको पूर्ण फाइदा उठाउदै ११ मिनेट बाकी रहदा एडरले गोल गरेपछि उनी पोर्चुगलमा एका एक हिरो बने । सबैले रोनाल्डो, रोनाल्डो भनिरहदा पोर्चुगलले अनपेक्षित हिरो पाउदा झनै धेरै उत्साहित भएका थिए ।
तर पांच बर्षयता आइपुग्दा आइतबार वेम्ब्लीमा इटाली र इंगल्याण्ड युरो कपको उपाधिका लागि भिड्नु अघि ट्रफि लिएर आएका एडर सबैले बिर्सिएका हिरो भइसकेका छन् ।
कति पयको लागि एडरको मुहारमा देखिएको निराशा स्पष्ट रुपमा नै ध्यानमा आएको थियो । तर एडर आफ्नै लागि भने ६५ हजार दर्शक रहेको वेम्ब्लीमा ट्रफि लिएर हिड्दा आफ्नो असफलताको बयान गर्दै थियो ।
२०१६ को उक्त ऐतिहासिक रात पछि के भयो त एडरको जीवनमा ?
पोर्चुगिज महारथी ब्रागाबाट एडर युरो कपको ठ्याक्कै एक बर्ष अगाडी ५ मिलियन पाउण्डमा इंग्लिस प्रिमियर लिग टोली स्वान्सेसंग अनुबन्धित भएका थिए । तर पहिलो १५ खेलमा गोल गर्न चुकेपछि बाकी सिजनका लागि उनलाई लोनमा फ्रेञ् च लिग वान टोली लिल पठाइयो ।
लिलका लागि १३ खेलमा ६ गोल गरेपछि उनी रोनाल्डो, नानी र साञ्चेजसंगै पोर्चुगलको युरो कप टोली अटाए । ३-३ गोल गरेपछि रोनाल्डो र नानी पोर्चुगलको युरो अभियानको दुई मुख्य खेलाडी रहे। नकआउटमा पोल्याण्ड र वेल्सलाई हराएपछि पोर्चुगलले फ्रान्ससंगको भिडन्त पक्क गर्यो ।
पहिलो उपाधि पछ्याइरहेको एडर उक्त युरोलाई आफ्नो ब्रेकथ्रु प्रतियोगिता बनाएका सान्चेजको स्थानमा ८० औं मिनेटमा प्रवेश गरे । अतिरिक्त समयमा मात्र ११ मिनेट रहेको स्थितिमा एडरले अविश्वसनीय रुपमा प्रतियोगिताको पहिलो र एक मात्र गोल गरे ।
पछिल्लो पांच बर्षमा एडरका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि आफैले जिताको युरो कप ट्रफि लिएर वेम्ब्ली स्टेडियम प्रवेश गर्नु थियो
फ्रान्स गोल फर्काउन असफल रहेपनि पोर्चुगल पहिलो पटक उपाधि जित्न सपल रह्यो ।
एडरको नायकत्वको अपेक्षा गर्दै फ्रान्समा उनको लोन मुभलाई नयां सिजनका लागि स्थायी बनाइयो । तर ३१ लिग वान खेलमा मात्र ६ गोल गरेपछि लिलले पनि उनलाई रसियन प्रिमियर लिग क्लब लोकोमोटिभ मस्कोमा लोनमा पठायो ।
एक बर्षपछि लोकोमोटिभ मस्कोले उनको लोन मुभलाई स्थायी बनायो ।
२०१६ को युरोको हिरो रहनुका साथै पछिल्लो एक बर्ष रुसमै बिताएपनि एडर रुसमै हुन गइरहेको बिश्वपका लागि पोर्चुगिज टोलीमा अटाएनन् ।
गत सिजनसम्म लोकोमोटिभमै बिताएका एडरले आफू खेलेका ९ खेलमा गोल गर्न असफल रहे । उनले चार सिजन बिताउदा रुसी टोलीका लागि ७२ खेलमा जम्मा ९ गोलमात्र गरे ।
लोकोमोटिभले उनलाई रिलिज गरेपछि उनी अहिले भने बेरोजगार भएका छन् । आफू युरोपको प्रमुख खेलाडीको रुपमा धेरै दिन सक्ने साबित गर्न उनी मौका कुरिरहेका छन् ।
एडर वेम्ब्लीमा झल्कदा उनी उपलब्ध रहेको बिषयमा धेरै व्यवस्थापकहरु जानकार पनि भएका होलान् ।
यद्दपि एडर बेरोजगारीको पहिलो दिनहरुमा मात्रै छन् । पुर्व इंगल्याण्ड स्टार ड्यानियल स्टरिज अहिले यसैसिजन ला लिगामा बढुवा भएको स्पेनिस टोली रियल मायोर्कासंग प्रशिक्षण गर्दैछन् ।
मार्च२०२० मा टर्किस टोली ट्राब्जन्सपोरले पनि साथ छोडेपछि उनी डेढ बर्ष भन्दा क्लबबिहिन बन्न पुगे । एडर आफू त्यति लामो समय बेरोजगार रहनु नपर्ने आशा गरिरहेका छन् ।
उनलाई लिएर अर्को प्रिमियर लिग क्लब ब्राइटन केही सकारात्मक रहेको हल्ला मार्चमा चलेको थियो ।
युरो २०२०: कस्ले के-के जिते ?
पेनाल्टी सुटआउटमा तीन खेलाडी चुक्दा इग्ल्याण्डको युरोकप उपाधि जित्ने सपना अधुरै रह्यो । इटालीसँग ३–२ गोल अन्तरले पराजित भएसँगै पहिलो पटक युरो कपको उपाधि जित्ने इग्ल्याण्डको सपनामा तुसारापात भयो ।
६० हजार दर्शक सहभागी घरेलु मैदानमा इंग्ल्याण्डले सुरूवाती अग्रता लिएको थियो । तर अग्रता जोगाउन नसक्दा निर्धारित र अतिरिक्त समय १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउट तर्फ धकेलिएको थियो ।
पेनाल्टी प्रहार गरेका पाँच खेलाडी मध्ये ह्यारी केन र ह्यारी मग्वाएरको प्रहारले मात्रै जाली चुमेको थियो । पेनाल्टी सुट कै लागि अतिरिक्त समयमा मैदान प्रवेश गरेका मार्कस राषफोर्डको प्रहार बारमा लागेर बाहिरियो । जाेडान सान्चो र साका बाकुयोको प्रहार इटालीका गोल रक्षकले रोके । इटालीका आन्द्रे बेलोट्टी र जोर्गिन्हो प्रहार इग्ल्याण्डका गोल रक्षकले रोकेका थिए । र इटालीले ५३ औँ वर्ष पछी युरो जित्यो ।
तर, युरो २०२० को उपाधी बाहेक व्यक्तिगत अवार्डमा कस्ले के-के जिते ?
टूर्नामेन्टका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी-गियालुइगी डोन्नारुम्मा
इटालीका गोलरक्षक डोन्नारुम्माले प्रतियोगितामा चार गोल मात्रै खाए । उनले युरोमा शानदार प्रदर्शन गरे । फाइनलमा पेनाल्टी पनि बचाए । २२ वर्षिय डोन्नारुम्मा टूर्नामेन्टका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित भए ।
गोल्डन बुट – क्रिस्टियानो रोनाल्डो
यूरोपीयन च्याम्पियनशिपको इतिहासमा सर्वाधिक गोलकर्ता क्रिष्चियानो रोनाल्डोले युरो २०२० मा अर्को उपलब्धी हात पारे । गोल्डेन बुट जितेका रोनाल्डोले पाँच गोल गरेका थिए । दोस्रो स्थानमा रहेका चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक सिचको पाँच गोल रहे पनि उनले धेरै समय खेलेका कारण गोल्डेन बुट जित्न बाट चुक्न पुगे ।
टूर्नामेन्टका युवा प्लेयर – पेद्री
१८ वर्षिय पेद्रीको प्रदर्शन निकै तारिफ योग्य थियो । पेद्रीले स्पेनको टोलीबाट राम्रा मात्रै खेलेनन् सबै फुटबल समर्थकहरुको ध्यान तान्न पनि सफल भए र उनी युरोका युवा खेलाडी घोषित भए ।
फाइनलको स्टार – लियोनार्डो बोनुची
अनुभवी डिफेन्डर लियोनार्डो बोनुचिलाई युरो २०२० फाइनलमा डिफेन्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि प्लेयर अफ द मैच घोषित गरियो साथै उनले दोस्रो हाफमा गरेको गोलका कारण इटालीले पेनाल्टी सम्म खेल पुर्याएको थियो ।
राष्ट्रिय2 days ago
पाँच महिना पछि आईपीएल आजबाट सुचारु हुँदै
राष्ट्रिय3 days ago
ओमान भ्रमणमा सुखद अन्त्यको आशामा नेपाल
फेरि हार्यो नेपाल
अमेरिकाबिरुद्ध नेपालको फितलो ब्याटिङ्ग
लिग वानमा खेलाडीमाथि आक्रमण, खेल स्थगित
नेपालले साफका लागि कतारमा तैयारी गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय4 weeks ago
लिभरपुलले सलाहलाई बिश्वकप छनौट खेल्न दिएन
नेपालले जुन सुकै लयमा भएपनि भारतबिरुद्ध सधै उत्कृष्ट दिदै आएको छः सुनिल क्षेत्री
टेस्ट जोगाउन संघर्ष गर्दै भारत
राष्ट्रिय4 weeks ago
गुलशन झा काठमाडौँबाट ईपीएल खेल्ने
दुई बर्षमै ग्रिजमन बार्सिलोनाबाट फेरि एट्लेटिको फर्किए